Ceni : “Eny amin’ny fokontany ny lisi-pifidianana” | NewsMada
Ceni : “Eny amin’ny fokontany ny lisi-pifidianana”
“Mizarazara maromaro ny ezaky ny Ceni amin’izao. Eo ny efa nametrahana ny lisi-pifidianana any anivon’ny fokontany tsirairay avy, efa ho roa volana izay. Mahazo mijery izany ny mpifidy rehetra”, hoy ny filoha lefitry ny Ceni, Rakotonarivo Thierry, teny Alarobia, afakomaly, momba ny fanavaozana ny lisi-pifidianana.
Amin’izay toerana tsy ahazoana tranonkalam-pifandraisana na fifandraisana an-telefaonina, mankany amin’ny biraom-pokontany ny mpifidy mijery ny anarany. Misy ny somary malaindaina amin’izany. Izay no nahatonga ny Ceni nanao ezaka hafa: vita, afakomaly, ny fanatonana akaikikaiky kokoa. Tsy voatery mankany amin’ny fokontany amin’izany fa miditra amin’ny tranonkalan’ny Ceni, amin’ny alalan’ny anarana sy ny laharan’ny kara-panondro.
Fanamarinana no atao fa tsy fanokafana lisi-pifidianana
“Amin’ny 1 desambra no hanomboka ny fanavaozana ny lisi-pifidianana, ary hifarana vonjimaika ny 31 janoary 2018. Havoaka ny 15 avrily 2018 ny lisi-pifidianana”, hoy izy.
Manamarina ny anarany ao amin’ny lisi-pifidianana, izay nofaranana ny 15 avrily 2017, eny anivon’ny fokontany ny mpifidy. Hamarinina amin’izany raha misy diso na tsy ampy ny momba azy.
Efa misy kahie eny anivon’ny fokontany andraisana ny fanitsianana fanakianana ataon’ny mpifidy. Toy izany koa raha tsy ao ny anaran’izay vao feno 18 taona, ohatra, na vao nifindra monina. Nefa tsy mbola azo atao ny manokatra ny lisi-pifidianana, ka hampiditra izany avy hatrany raha tsy manomboka ny 1 desambra ary hifarana ny 31 janoary 2018 izany.